Karazan-seza samy hafa ho an'ny efitrano fisakafoanao | Bezzia
Maria vazquez | 16/07/2021 18:00 | fanaka
Safidio ny seza fisakafoanana Tsy mora amintsika matetika izany. Izy ireo dia singa manan-danja amin'ny fiasan'ity habaka ity; tsy maintsy mahazo aina ho antsika izy ireo raha hampiasa an'ity habaka ity isan'andro isika. Saingy, ho fanampin'izay, manana fitaomana lehibe amin'ny hatsarany izy ireo. Mba hanampiana anao hisafidy dia anio no tianay hizara aminao ny karazana seza samihafa ho an'ny efitrano fisakafoanao.
Ny seza zarainay anio dia seza famolavolana maoderina. Seza malaza be izay antenainay fa afaka manentana anao hahafantarana izay karazana seza tadiavinao ao amin'ny efitrano fisakafoanao. Aza matahotra ny ho raiki-pitia amin'ny iray noho ny maha-exclusivité azy, seza maro ankehitriny no aingam-panahy avy amin'izy ireo ary manahaka azy ireo aza, izay hahafahanao mividy sombin-javatra mitovy amin'izany amin'ny vidiny mirary lavitra noho ny tany am-boalohany.
Seza plastika Eames Nataon'i Charles sy Ray Eames izy io tamin'ny 1950 ho an'ny Museum of Modern Art any New York. Ilay seza vita indostrialy voalohany amin'ny plastika ary mpisava lalana karazana fanaka vaovao izay ho lasa jeneraly: ny seza maro samy hafa izay azo ampifangaroina amin'ny faladiany samy hafa ny akorany.
Androany dia mbola fahombiazana ara-barotra izy ireo. Safidy lehibe handravahana ny efitrano fisakafoanana, na ao an-trano na any ivelany, miaraka amin'ny fanahafana maro eny an-tsena. Ireo miaraka ranjo hazo Izy ireo no be mpitia indrindra ankehitriny satria naman'izy ireo tsara amin'ny fironana Nordic. Apetraho manodidina ny latabatra fotsy maoderina izy ireo ary hahazo toerana tonga lafatra ho an'ny efitrano fisakafoana moderina ianao. Na miloka amin'ny fampifangaroana azy amin'ny latabatra hazo mba hampifanohitra ny fomban-drazana sy ny maoderina.
Teraka tany Frantsa tamin'ny 1927, ny seza Tolix dia mijanona ho iray amin'ireo entana ilaina indrindra. Steel sy stackableIty seza namboarin'i Tolix ity, orinasa iray natsangan'ny indostrialy frantsay Xavier Pauchard hamokatra fanaka metaly azo ampiharina sy manara-penitra, dia mbola velona mandraka androany amin'ny endriny maro.
Namboarina tamin'ny vy nandrendrika, namboarina tamin'ny matt na gloss, miloko miloko ... Atambatra ireo seza Tolix miaraka amin'ny latabatra hazo mijery morontsiraka mba handravahana ireo efitrano fisakafoana any ambanivohitra na indostrialy, ary maoderina sy minimalist hitady fomba avant-garde kokoa. Fenoy miaraka amin'ny jiro pendant lehibe ary hahatratra zoro hihinana magazine ianao.
Ny Y-Chair, fantatra ihany koa amin'ny hoe Wishbone Chair, dia iray amin'ireo endrik'i Wegner fanta-daza ary iray amin'ireo karazana seza izay heverinay fa nahomby indrindra tao amin'ny efitrano fisakafoanana rehetra. Noforonina tamin'ny 1949, ity seza ity voasokitra amin'ny hazo misy seza tady, manana back back miendrika Y izay manome ny anarany. Na eo aza ny endrika faran'izay kely indrindra dia takiana fahaizana lehibe ny fanaovana azy amin'ny tanana.
Ny seza kanto sy mahazo aina dia misy ao ala, famaranana ary loko isan-karazany. Amin'ny endriny nentim-paharazana indrindra, dia mifanentana tanteraka amin'ny tontolo klasika sy avant-garde, voaravaka fotsy, izay manome hafanana lehibe. Na dia mainty sy manodidina ny latabatra hazo maoderina aza dia tsara indrindra ny manatsara ny fahononam-po sy ny hakanton'ny trano fisakafoanana.
Ny seza Panton dia iray amin'ireo Pop Art kisary. Namboarin'ny mpanao mari-trano Verner Parton tamin'ny taona 1960, nanomboka novokarina tamin'ny andiany nanomboka ny taona 1967 iarahana amin'i Vitra. A seza ergonomika iray, ary vita amin'ny plastika tanteraka. Sombin-tany izay sahy ihany no sahy.
Ny seza Panton dia misy loko isan-karazany. Tsy ilaina intsony ny milaza fa mitondra a fikitika maoderina sy sahisahy mankany amin'ilay efitrano nametrahana azy ireo. Na dia misy aza ireo sahy manodidina ny latabatra fisakafoanana amin'ny seza Panton fotsiny, mahazatra ny manambatra azy ireo amin'ny karazana seza hafa, indrindra raha te hanana hafanana ianao. Tianay izy ireo amin'ny fotsy miaraka amin'ny latabatra vera na hazo kely.
Ny seza Cesca, noforonin'i Marcel Breuer tamin'ny taona 1928 ary natontan'i Knoll, dia misy vatan-tsolika vy sy volom-baravarana mifamadika sy seza, mahazatra ny asa tanana nentim-paharazana. Fitambarana revolisionera amin'ny androny izay tsy azo lavina ankehitriny.
Ny maha-izy azy ireo fironana ny fanaka haratoNy fampidirana ireo seza karazana Cesca ao amin'ny efitrano fisakafoana dia tsy ho toy ny hevitra mahomby kokoa. Tianay ny kinova nentim-paharazana mifangaro amin'ny latabatra hazo na verika. Fa koa ireo manana zana-kazo mainty noho ny fifanoherana mahaliana izay noforonina rehefa apetraka manodidina ny latabatra hazo amin'ny feo maivana izy ireo.
Iza amin'ireo karazana seza ireo no safidinao ao amin'ny efitranonao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Decor » fanaka » Karazan-seza samihafa ho an'ny efitrano fisakafoanao
Inona no atao hoe tsy mety?